မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: February 2009
ပဒုံမင်းသို့ သံတော်ဦးတင်ခြင်း (ထင်ထင်ရှားရှားဖတ်ရှူနိုင်ရန် ပုံများကိုကလစ်ပြီးဖတ်ပါ)
ဒီပို့စ်ကို ဝေမျှပေးတဲ့ http://www.myanmarmuslim.net အားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Ordinary person at 1:28 PM No comments:
မော်လနာ ရူမ်မီ (Turkey)
Posted by Ordinary person at 6:27 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 2:49 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 2:19 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 7:34 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 5:51 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 1:56 PM No comments:
Special thanks to Vitoria Million.
Posted by Ordinary person at 3:17 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 4:00 AM No comments:
သူငယ်ချင်းတို့ ဗဟုသုတမေးခွန်းလေးတွေကို အတူတူ ဖြေကြည့်ကြရအောင်နော်။
၁။ တမန်တော်မုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မဒီနာရွှေမြို့တော်တွင် ဘယ်နှနှစ်ကြာ ၀ဟီဗျာဒိတ်တော်ကို ရရှိခဲ့ပါသနည်း။
၂။ ပထမဆုံးသော စူရဟ်ကို ဘယ်ဒေသမှာ ချပေးခဲ့ပါသလဲ။
၃။ ကုရ်အာန်တစ်အုပ်လုံး အစအဆုံးပြီးပြည့်စုံစေရန် နှစ်ပေါင်း မည်မျှကြာအထိ ၀ဟီ(ဗျာဒိတ်တော်)ချပေးခဲ့ရပါသနည်း။
၄။ ဆွလားသ်၏ ရကအသ်တိုင်းတွင် မဖတ်မနေဖတ်ရသော ကုရ်အာန်၏ စူရဟ်မှာ အဘယ်နည်း။
၅။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ဆုဒုအာတစ်ခုအဖြစ် သင်ကြားပေးခဲ့သော စူရဟ်မှာ အဘယ်စူရဟ်နည်း။
၆။ စူရဟ် ဖွာတေဟာကို ကုရ်အာန်၏အစတွင် ဘာအကြောင်းကြောင့် ထားခဲ့ရပါသနည်း။
၇။ ကုရ်အာန်ထဲတွင် သူမ၏အမည်ကို တွေ့ရှိရသော တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးကား မည်သူနည်း။
၈။ ညွှန်ကြားချက်အများဆုံးကို ကုရ်အာန်၏ မည်သည့်စူရဟ်မှာ တွေ့ရှိရပါသနည်း။
၉။ ဗစ္စမီလ္လာဟ်နှင့် စတင်ထားခြင်းမရှိသည့် စူရဟ်ကား အဘယ်နည်း။
၁၀။ ကုရ်အာန်၏ မည်သည့်စူရဟ်တွင် ဗစ္စမီလ္လာဟ် နှစ်ကြိမ်ပါရှိသနည်း။
၁၁။ တမန်တော် အသီးသီး၏နာမည်ဖြင့် အမည်တပ်ထားသော စူရဟ်များမှာ ကုရ်အာန်ထဲတွင် ဘယ်နှစ်ခုပါရှိသနည်း။ ယင်းတို့ကို ပြောပြပါ။
၁၂။ ကုရ်အာန်၏ မည်သည့်အပိုင်းမှာ အာရ်တွလ်ကုရ်စီ (ပလ္လင်တော်ကဏ္ဍ)ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသနည်း။
၁၃။ ကုရ်အာန်ထဲတွင် ဂုဏ်ပေးဖော်ပြထားသော တမန်တော်မဟုတ်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး၏အမည်ကား အဘယ်နည်း။
၁၄။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသန်းပေါင်းများစွာက အာဂုံဆောင်ထားခဲ့ရသော တစ်ခုတည်းသော ကျမ်းစာကား မည်သည်နည်း။
၁၅။ ကုရ်အာန်၏ အာယသ်အချို့ကို ကြားနာခဲ့ကြသော ဂျင်န်များက အချင်းချင်းဘယ်သို့ ဆိုခဲ့ကြပါသနည်း။
၁၆။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို ကမ္ဘာ့ဘာသာစကား ဘယ်နှမျိုးနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုပြီးခဲ့ပါပြီနည်း။
၁၇။ ကုရ်အာန်ထဲတွင် ယင်း၏ မျိုးဆက်သုံးဆက်မှ တမန်တော်များကို ဖော်ပြခံထားရသော တမန်တော်၏အမည်ကား အဘယ်နည်း။
၁၈။ ကမ္ဘာကြီး၏ အစနှင့်အဆုံး နိဂုံးကို အရှင်းလင်းဆုံးဖော်ပြထားသော ကျမ်းဂန်ကား အဘယ်နည်း။
၁၉။ ကုရ်အာန်အရ မက္ကာမြို့ကို အခြား မည်သည့်အမည်ဖြင့် ခေါ်ဆိုထားပါသနည်း။
၂၀။ မဒီနာမြို့ကို ကုရ်အာန်ကပေးထားသော အခြားအမည်တစ်ခုကို ပြောပြပါ။
၂၁။ ကုရ်အာန်က မည်သူက၏မျိုးဆက်ကို ဗနီအစ္စရာအီလ်ဟူ၍ ခေါ်ဆိုထားပါသနည်း။
၂၂။ ကုရ်အာန်ထဲတွင် တိရစ္ဆာန်အမည်နှင့်ရှိနေသော စူရဟ်မည်မျှရှိသနည်း။
၂၃။ မည်သည့်စူရဟ်ကို လအမည်ပေးထားသနည်း။
၂၄။ ကြယ်အမည်နှင့် မည်သည့်စူရ်ဟ်ကို ပေးထားသနည်း။
၁။ ၁၀ - နှစ်
၃။ ၂၂ - နှစ်၊ ၅ - လ၊ ၁၄ - ရက်
၄။ စူရဟ် ဖွာတေဟာ
၅။ စူရဟ် အလ်ဖွာတေဟာ
၆။ ၎င်းသည် ကုရ်အာန်၏ တံခါးမဖြစ်ပါသည်။
၈။ စူရဟ် အလ်ဗကရဟ်
၉။ စူရဟ်သောင်ဗဟ် (သို့မဟုတ်) ဗရားအ
၁၀။ စူရဟ် အလ်နမလ်
၁၁။ ၆-စူရဟ် (က) စူရဟ် အလ်ယူနွတ်စ် (ခ) စူရဟ် အလ်ဟူးဒ် (ဂ) စူရဟ် အလ်ယူစုဖ်
(ဃ) စူရဟ် အလ်နူးဟ် (င) စူရဟ် အလ်မုဟမ္မဒ်
၁၂။ တတိယပိုင်းအစ (ကဏ္ဍ ၂၊ ပါဒ ၂၅၅)
၁၃။ လွတ်ကမန်း အဇီဇ်(အီဂျစ်မှ) နှင့် ဇုလ်ကရ်နိုင်း
၁၅။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်သောလမ်းကို ညွှန်ပြသည့် စံတုမဲ့ ရေးသားချက်ကို ကြားနာခဲ့ရပါသည်။
အမှန်ပင် ကျွန်ုပ်တို့ ယင်းကို ယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၇။ အီဗရာဟီမ် နဗီ
၁၉။ ဗက္ကာဟ်နှင့် ဗလဒုလ်အမီးန်
၂၂။ စူရဟ် ၆-ခုရှိသည်။ (က) အလ်ဗကရဟ်(နွားမကဏ္ဍ) (ခ) အလ်အန်အမ်း(သားကောင်များကဏ္ဍ) (ဂ) အလ်နဟလ်(ပျားများကဏ္ဍ) (ဃ) အလ်နမလ်(ပုရွက်ဆိတ်ကဏ္ဍ) (င) အလ်အန်ကဗူးသ်(ပင့်ကူကဏ္ဍ) စူရဟ် (စ) အလ်ဖီးလ်(ဆင်ကဏ္ဍ)
၂၃။ အလ်ကမရ် (စူရ်ဟ် ၅၄)
၂၄။ အလ်နဂျမ် (စူရဟ် ၅၃)
Special thanks to sister Waing.
Posted by Ordinary person at 7:00 PM No comments:
စူရာဟ် အလ်ကာဖီရူန် (မယုံကြည်သူများကဏ္ဍ)
ကုလ် ယားအိုင်ယုဟလ် ကားဖိရူးန်
၁။ (အို-နဗီတမန်တော်) အသင်သည် ဤသို့ ပြောကြားပါလေ၊ အို-ကာဖိရ် ငြင်းပယ်သူအပေါင်းတို့။
၂။ ငါသည် အသင်တို့ ကိုးကွယ်လျက်ရှိကြသော ကိုးကွယ်ရာများကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သည်မဟုတ်ပေ။
ဝလာ အန်းန်သွန်းမ် အားဗိဒူးန မာ အအ်ဗုဒ်
၃။ ၎င်းပြင် အသင်တို့သည်လည်း ငါကိုးကွယ်လျက်ရှိသော ကိုးကွယ်ရာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြသူများ မဟုတ်ပေ။
ဝလာ အနာ့ အားဗိဒွန်းမ် မား အဗသ်သွန်းမ်
၄။ ထို့ပြင်ငါသည် အသင်တို့ကိုးကွယ်ကြကုန်သော ကိုးကွယ်ရာများကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မည့်သူမဟုတ်ပေ။
၅။ ထိုနည်းတူစွာ အသင်တို့သည်လည်း ငါကိုးကွယ်ရာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ကြမည့်သူများမဟုတ်ပေ။
လကွန်မ် ဒီးနုကွန်းမ် ဝလိယဒီးန်
၆။ (စင်စစ်မှာကား) အသင်တို့အဖို့ အသင်တို့၏ အကျိုး၊ လမ်းစဉ်၊ သာသနာဖြစ်၍ ငါ၏အဖို့ ငါ၏အကျိုး၊ လမ်းစဉ်၊ သာသနာပင်ဖြစ်သည်။
Posted by Ordinary person at 7:44 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 1:36 AM 1 comment:
အသျှင့်ဂရုဏာနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဥယာဉ်လောက်
Posted by Ordinary person at 10:10 AM No comments: